Home » Drama, Essays.. » ချစ်ခြင်းပုံပြင် နိဒါန်း
နာက …ဇာတ်ဘယ်လိုသိမ်းလဲအမြဲအရင်ဖတ်တာ…နာ့လို ကြောင်တောင်တောင်တွေရှိမလားလို့ …အာဟိ
ဇာတ်လမ်းကို ဖတ်ပြီး ကချင်နုထွားကြီးကို သနားတယ်။
အပြင်မှာကြည့်ပြီး ချစ်တီးမကြီးဖြူဖွေးကို နှမျောတယ်။
မထင်ရင်မထင်သလို လက်သီးစာကျွေးခံရတာ ဘူဆိုဘူးမှမသိ…အန်တီမမလဲမသိ…ကျော် ဆောရိုးပဲသိ…အာဟိ
ဒါတောင် လည်ဂုပ်ကိုဖမ်းချုပ်ပြီး အာဘွားမွမွကျလူးခံရတာ မပါသေးဘူး…အငိငိ တသိန်း
တီဒုံရယ်.. .မေတ္တာထားတယ်လား …စကားမစပ်..နီဂိုးဆယ်ယောက်နည်းတယ်..အဟိဟိ
ပေးတဲ့ဆုနဲ့အမြန်ပြည့်ပါရစေ ကိုကပ္ပိယ ကြီးရေ….ငါ့နှယ့် ..သိပ်မထိုးပေးချင်ရှာဘူး..အဟီး
“ံ့ချောမောခန့်ငြားသော ရုပ်သွင် ၏ အရှိန်ကြောင့် သက်မဲ့ချယ်ရီပန်းတို့ ပင် ဟန်မဆောင်နိုင်ပဲကြွေသည် ”
ဥက္ကဌကြီးအားပေးသွားတယ်လား …. ကျေးကျေးပါဗျာ
အင်ဟင့်… အကြောင်းမသိရင် ကချင်နူထွားဂျီးက သနားစရာ…
အလိုလေး….၀ိုင်းမေတ္တာပို့ထားကြပါလား….အဲ့ရာပြောတာနေမှာ …မှန်တာရေးရင် ရွာပြင်ထုတ်ခံရတယ်ဆိုတာ….အာဟိ
ဖတ်ရင်းနဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေကို ပြောင်းပြန်မြင်ပြီး သနားမိနေတယ်.. ဘိုလုပ်ရမလဲ..
အိုမို..အိုမို…. ကယ်ပဲတော်…ပြောင်းပြန်မြင်စရာလား…မားသမခံရတာ … ကိုယ်တော်ကြီးကိုယ်တော်လေးအသိ …အာဟိ
နာ တော့ ဂလို မျောက်စိတ်ကို အဟွာတော်ထားရတဲ့ ချစ်တီးမဂျီးကိုပဲ သနားတယ်
1. ဒါကြောင့်ဆရာ့ကိုပြောတာ ချောတယ်သတိထားလျှောက်ပါလို့သတိ အတန်တန်ပေးနေတာ…။
ကိုယ်ကိုယ်ကိုများချောတယ်ရယ်လို့ပြောရဲတဲ့လူနှစ်ယောက် ဒီဂဇက်ရောက်မှပဲတွေ့ဖူးတော့တယ်.. ဒညင်းဝက်နဲ့ စိုင်းခမ်းဖမ်းမနိုင်… တို့များတော့ သူများကချောတယ်ပြောရင်တောင်ရှက်လွန်းလို့ :))
အသိသာကြီး..ချောလားမချောလား…….ချက်ချင်းပြန်ပြောမလို့ပဲ …အခုသုံးနှစ်ကြာမှ သေချာသွားလို့ ..အဟိဟိ